कोरोना सङ्क्रमण भएपछि निकाे हुन कति समय लाग्छ ? – Khabar Silo
कोरोना सङ्क्रमण भएपछि निकाे हुन कति समय लाग्छ ?
काठमाण्डौ – कोभिड १९ महामारी सन् २०१९ को अन्त्यतिर सुरु भए पनि केही बिरामीहरु पूर्णरुपमा निकाे हुन लामो समयसम्म लाग्ने सङ्केत देखिएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणपछि ठिक हुन लाग्ने समय तपाईँ कुन हदसम्म बिरामी हुनुभएको थियो भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ ।
केही सङ्क्रमित छोटो समयमा नै निको हुन्छन् भने केही सङ्क्रमित रोगलाई जित्न लामो समयसम्म सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । उमेर, लिङ्ग र अन्य स्वास्थ्य समस्यालगायत यी सबै कुराले कुनै पनि व्यक्ति कोभिड १९ बाट गम्भीर बिरामी हुने खतरा बढ्छ ।
मलाई हल्का लक्षण देखिए के हुन्छ ?
कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुने धेरैजसो व्यक्तिमा खोकी र ज्वरो जस्ता मुख्य लक्षण देखिन्छ । तर उनीहरुमा दुखाइ, थकान, घाँटीमा समस्या र टाउको दुख्ने समस्या पनि देखिन सक्छ । सुरुमा सुख्खा खोकी देखिन्छ तर केही व्यक्तिमा खोकीसँगै खकार पनि देखिन्छ, जसमा कोरोना भाइरसका कारण मारिएका फोक्सोको मृत कोषिकाहरु हुन्छन् ।
यी लक्षणको उपचारको रुपमा चिकित्सकहरुले आराम गर्न सल्लाह दिन्छन्, दुखाइ कम गर्न पारासिटामोल र पर्याप्त मात्रामा पानी पिउन भनिन्छ । सामान्य लक्षण देखिएका बिरामीहरु चाँडै ठिक हुने आँकलन गरिन्छ । ज्वरो एक हप्ताभित्रै निको हुनुपर्छ तर खोकी निको हुन भने अलि बढी समय लाग्न सक्छ ।
चीनमा प्राप्त आँकडालाई लिएर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विश्लेषण अनुसार सङ्क्रमणपछि कुनै पनि व्यक्तिलाई निको हुन औसत दुई हप्ता लाग्छ ।
मलाई गम्भीर लक्षण देखिए के हुन्छ ?
सङ्क्रमणले केही व्यक्तिलाई गम्भीर स्थिति निम्त्याउँछ । सङ्क्रमणको सातदेखि १० दिनभित्र यसको अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य स्थिति खराब हुँदै जान्छ । फोक्सोमा जलनको समस्यासँगै श्वास लिन पनि कठिन हुने गर्छ ।
शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली सङ्क्रमणविरुद्ध लड्न कोसिस गर्ने हुँदा यस्तो समस्या निम्तिन्छ । वास्तवमा प्रतिरक्षा प्रणाली कोरोना भाइरसविरुद्ध तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँछ र यसको केही असर हाम्रो शरीरमा पनि देखिन्छ । केही व्यक्तिलाई त अक्सिजन थेरापीको लागि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
बेलायती डाक्टर सारा जार्भिस भन्छिन्, ‘श्वास फेर्न समस्या हुनेहरुलाई सुधार हुन केही धेरै समय लाग्न सक्छ । शरीमा छटपटी र बेचैनीको अवस्था देखिन्छ ।’ यस्ता समस्या भएका व्यक्ति निको हुन दुईदेखि आठ हप्तासम्मको समय लाग्न सक्ने सारा बताउँछिन् ।
यद्यपि त्यस्ता व्यक्तिको कमजोरी केही धेरै समयसम्म रहिरहन्छ ।
मलाई यसको गम्भीर लक्षण देखिए अथवा आईसीयूमा जान परे के हुन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) का अनुसार २० मध्ये एक जनालाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा जानुपर्ने अवस्था आउँछ । यसमा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी पनि पर्छन् ।
यदि कोही व्यक्ति आईसीयूमा भर्ना हुन्छ भने स्वतः उसलाई ठिक हुन धेरै समय लाग्छ, चाहे बिरामी जोसुकै होस् । आईसीयूपछि ती व्यक्तिलाई जनरल वार्डमा शिफ्ट गरिन्छ र अवस्था हेरेर उसलाई घर जान अनुमति दिइन्छ ।
फ्याकल्टी अफ् इन्टेन्सिभ केयर मेडिसिनका डिन डाक्टर एलिसन पिटार्ड जटिल स्वास्थ्य हेरचाह (क्रिटिकल केयर) पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १२ देखि १८ महिनासम्म लाग्न सक्ने बताउँछन् ।
अस्पतालको बेडमा लामो समयसम्म रहँदा मांशपेसीमा पनि असर पर्छ । रोगी कमजोर हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्छ नै । केही व्यक्तिलाई त सामान्य अवस्थामा फर्कन फिजियोथेरापीको पनि सहारा लिनुपर्ने हुन्छ ।
आईसीयूमा रहँदा शरीरले अनेक किसिमका उपचार र माध्यमको सामना गर्छ र कहिलेकाहीँ मानसिक समस्या निम्तिन सक्ने आशङ्का पनि गरिन्छ ।
कार्डिफ एण्ड वेले युनिभर्सिटी हेल्थ बोर्डका क्रिटिकल केयर फिजियोथेरापिस्ट पउल ट्वोज भन्छन्, ‘यो बिमारीसँगै भाइरल थकान निश्चित रुपमा एक ठूलो कारक हो ।’ चीन र इटलीबाट यस्तो रिपोर्ट्स आएको छ, जसमा सङ्क्रमित बिरामीको पूरै शरीरमा थकान, श्वास लिन समस्या, लगातार खोकी र श्वासको उचारचढाव जस्ता लक्षणसँगै निद्राको समस्या पनि देखिएको छ ।
‘केही बिरामीहरुलाई निको हुन निकै समय लाग्यो महिनौसम्म ।’ तर यो कुरा सबैमा लागू हुँदैन । केही व्यक्ति आईसीयूमा निकै कम समय रहन्छन् भने केहीलाई लामो समयसम्म भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
Posted on March 7, 2021 March 7, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं।। झिमरुक-७ रातटारी प्युठान निवासि सुदन थापाको श्रीमती अनिसा महतारा छेत्रीको २४ वर्षको उमेरमै भएको दु:खद निधनले स्तब्ध बनायो, मृ तक अनिशा प्रती हार्दिक श्रद्धाञ्जली, सोकाकुल परिवारजनमा गहिरो समवेदना। अस्ति मात्रै उहाँहरुलाई जिल्ला अस्पताल विजुवारमा पुत्रलाभ भएको थियो ।अस्ति इन्टरनल बिलिडिङ भएपछि अस्पतालका डाक्टरले पुन अप्रेसन गरेका थिए । तर अप्रेसन जटिल बनेपछी बुटवल रेफर […]
पर्सामा कोरोना संक्रमित भागे प्रहरीले गोली चलाउन सक्ने